Shiinaha DuoDuo Cart Shopping DG1026 / DG1027 with 360 ° Rolling Swivel Wheels soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Duoduo
Baabuurka DuoDuo ee Dukaameysiga DG1026 / DG1027 oo leh 360 ° Wareegyo Wareeg ah
Cabbirka Furmay: 50x52x96CM
Cabbirka Dambiilaha: 36x38x51CM
Xajmiga kartoonka: 118x46x17CM
Gawaarida waaweyn: Φ180mm
Gawaarida Yaryar: Φ100mm
Cabbirka Furmay: 57x62x101CM
Cabbirka Dambiilaha: 40x46x60CM
Xirmo: 2pcs halkii kartoon
Xajmiga kartoonka: 122x54x11CM
Gawaarida waaweyn: Φ240mm
Gaariga wax lagu gado oo leh dambiil, waa waxtar leh in alaabta la dhigo marka aad wax iibsaneyso. Waqtigaas, dambiilaha waa la laaban karaa, taas oo si weyn u badbaadinaysa booska oo keenaysa habboonaan weyn. Gawaarida hortiisa waxaa ku yaal laba giraangirood oo wareegaya, waxay ka caawin kartaa gaadhigu inuu si fiican u sii socdo. Waa caawiyaha wanaagsan ee nolol maalmeedkaaga.
Isku laab laalaab si fudud loogu keydiyo jir iyo meel kale.
Naqshad isku-duuban oo loogu talagalay kaydinta fudud; ku habboon meelaha yaryar
Qabashada dhererka-hagaajinta leh xajinta xajinta si loogu daro raaxada
Dhisme cufan oo cimri dherer
Gawaarida culus ee culus ee shaashadda culus waxay ku fiican yihiin dadka deggan magaalada, ardayda iyo waayeelka
Ku habboon dukaamaysiga, kaamamaynta, dharka lagu dhaqo, safarada beeraha xeebta iwm
Haddii aad wax u adeeganaysid, dhar dhaqid ama maalin ku qaadanaysid xeebta, baaburkan gacan qabashada ah ee gacan qabashada leh ee giraangiraha ayaa safarka fududeynaya. Shaagagga culus, giraangiraha giraangiraha leh taayirrada caagga ah ayaa fududeynaya dhaqaajinta, iyo qabashada dhererka lagu hagaajin karo ee leh xajmiga xumbada ayaa bixisa raaxo ka sarreysa. Gawaarida weyn ee isku laaban oo leh giraangiraha oo ay laalaabaan laalaabyada si aad si dhakhso leh oo fudud ugu keydiso meel ka baxsan jidka marka aan la isticmaalin.
Gawaarida Gawaarida Yar Yar ee Easy Wheels waxay ahayd gaari-soo-saare heer sare ah oo leh xoog warshadeed oo loogu isticmaalo guriga. Markaad jiifto, oo gaadhigu laalaaban yahay. Dia oo siinaya qadar aan fiicnayn oo ku habboonaanta cabbirka is haysta. Qaabkan qaaska ah wuxuu la yimaadaa giraangiraha dhabarka leh ee 'chrome-spoked'.
Hore: Baabuurka DuoDuo ee DG1015 oo wata 3 Wareegyo Wareeg ah & Boorsada Cawrada laga saari karo
Xiga: Kaararka Dukaameysiga DuoDuo DG2035 Tamarta Birta Trolley Dolly oo leh Kursi Laabilayo
Baabuurta Iibinta ee ugu Fiican
Gawaarida Dukaameysiga Ugu Fiican
Gadiid Dukaameysi Fudud
Gawaarida Dukaamada Fudud
Iibsiga Cart Shopping Iyadoo Wheelsl Wheels
Iibsiga Cart Shopping Iyadoo Wheels
Dukaan Dukaameedka Dukaanka Duty culus
Baabuurta Dukaameysiga Guriga
Baabuur Weyn oo Weyn
Kaar Iibsiga Birta
Gawaarida Gawaarida Dukaameysiga
DuoDuo Dukaameysiga DG1007 Jaranjarada Jaranjarada Foldi ...
DuoDuo HC150S-P 250S-P oo leh 360 Degree Wareeg W ...
DuoDuo Dolly-WG8003 Wareejinta Gawaarida Gawaarida Trolley
Tarooli shandadaha isku laabmo DuoDuo DX3011 Iyadoo Tele ...
DuoDuo Dukaan Dukaameedka DG1008 oo ay la socoto Boorsada la ...
Kaararka Dukaameysiga DuoDuo DG2035 Troll Tamarta Birta ...